Global Voices teny Malagasy » Mahatsiaro An’i Mahsa Shekarloo, Nitondra Voalohany Ny Aterineto Tany Irana Ary Mpitaky Ireo Zon’ny Vehivavy · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Oktobra 2014 2:55 GMT 1	 · Mpanoratra Arseh Sevom Nandika Tantely
Sokajy: Iràna, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona, Ny Tetezana - The Bridge
Sarin'i Mahsa Shekarloo, avy tamin'i Kamran Ashtary . Nahazoana alalana ny fampiasana azy. Afaka zarainao fa tsy afaka amidy.
Teraka tao Teheran i Mahsa fa nandany ny fahazazany tao Chicago kosa. Niverina nifidra tany Irana izy ny voalohandohan'ny taona 2000, vao avy nahazo ny diplaomany tamin'ny Anjerimanontolo. Tany no nahitany toerana afaka hitiavany, ary fiarahamonina afaka hitondrany ny anjara birikiny. Tao amin'ny lahatsoratra momba an'i Mahsa, nanoratra toy izao The Feminist School [fa] :
Nandika teny ny boky roa an'i Shirin Ebadi izay nahazo ny loka Nobel ihany koa izy: Ireo Zon'ny Vehivavy ao amin'ny Repoblika Isamikan'i Irana  ary ny Tantaranà Vehivavy Iray.
Ny Febroary 2014, niasa mba hanampy ny fampiroboroboana sy ny fikarakaràna ny One Billion Rising tao Irana  (Fijoroan'ny Iray Lavitrisa ao Irana) i Mahsa, izay anisa'ny fankalazàna ny andro manerantany mampiasa ny dihy mba hisintonana ny sain'ny olona amin'ny resaka zon'ireo vehivavy. Izao ny filazalazan'ny vondrona azy :
Alefan'ny  One Billion Rising – Irana .
Taminà tafatafa ny taona 2007, niaraka tamin'ny Qantara.de , niresaka ny gazety amin'ny Aterineto miaro ny vehivavy izay naoriny i Mahsa: Bad Jens . Hanome anjara fitenenana ho an'ireo miaro ny vehivavy ao Irana no tanjon'ilay gazety, mba hanome làlana hanalàna ny fahatsapan'izy ireo fa irery izy, ary hanalàna ireo petra-kevitra avy any amin'ny tany Tandrefana.
Nekena somary alohaloha ihany tany Irana  ny Aterineto. Nanokatra toerana ahafahana manova ny tsangan-kevitra teren'ny governemanta ho arahana io, nanokatra adihevitra, ary ahafahan'ny tsirairay miteny.
Ny voalohandohan'ny taona 2000, fiteny faharoa be mpampiasa indrindra tao amin'ny Aterineto ny fiteny Persiana. Tena zavatra hafa nalaza be ny fanoratana bilaogy avy any Irana. Nahita endrika iray hitantaràna ireo tantarany ilay firenena iray onenan'ireo mpitantara . Nampiasa io hiresahana ny zavatra rehetra izy ireo, miainga any amin'ny Harry Potter ka hatramin'ny lalàna Silamo, ka hatramin'ny zon'ireo vehivavy. Tena zavatra nisongadina ireo voalohany namoaka nampahafantatra samirery ny aminy. Nahita fomba iray afaka hampifandraisana ny tsirairay ireo Iraniana, amin'ny lafiny maha-olona sy ara-politika, izay noferana fatratra nandritra ny taona maro. Nampiseho ny fanadihadiana momba ny Aterineto any Irana, natao ny taona 2008 , fa mifampihantsy ireo olona manana fomba fijery samihafa ary mifanitsaka. Mifampihantsy ireo fanehoan-kevitra apetraka ao amin'ny bilaogy, ao amin'ny fifampiresahana. Ao amin'ny taratasiny, nanoratra izao ireo Iraniana mpitaky fiovàna sy ireo mpikatroka mafana fo : ireo mpampiasa Aterineto, Babak Rahimi  sy Elham Gheytanchi:
Nilaza izao i Mahsa tamin'ny tafatafa tao amin'ny ABC news  ny taona 2005:
Navoaka voalohany tao amin'ny Arseh Sevom .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/10/22/64919/
 nanoratra toy izao The Feminist School [fa]: https://www.facebook.com/notes/the-feminist-school-
 Ireo Zon'ny Vehivavy ao amin'ny Repoblika Isamikan'i Irana: http://www.badjens.com/ebadi.html
 One Billion Rising tao Irana: http://www.jadaliyya.com/pages/index/16459/in-iran-global-social-action-to-end-violence-again
 vondrona azy: https://www.facebook.com/OneBillionRisingIran/
 One Billion Rising – Irana: https://www.facebook.com/OneBillionRisingIran
 niaraka tamin'ny Qantara.de: http://en.qantara.de/content/interview-with-mahsa-shekarloo-feminist-online-magazine-challenges-stereotypes-of-iranian
 Nekena somary alohaloha ihany tany Irana: http://www.arsehsevom.net/2011/03/irans-reformists-and-activists-internet-exploiters/
 Nampiseho ny fanadihadiana momba ny Aterineto any Irana, natao ny taona 2008: http://cyber.law.harvard.edu/publications/2008/Mapping_Irans_Online_Public/Iranian_blogosphere_map
 nanoratra izao ireo Iraniana mpitaky fiovàna sy ireo mpikatroka mafana fo : ireo mpampiasa Aterineto, : http://www.arsehsevom.net/2011/03/irans-reformists-and-activists-internet-exploiters/2/